Filtrer les éléments par date : mardi, 29 janvier 2019
mardi, 29 janvier 2019 18:31
Antsampanimahazo-Tombontsoa: Taolana sisa navelan'ny jiolahy tamin'ny omby very
Toy ny mahazatra dia mifoha maraina misafo ny omby ao an-tokontany ny tompony ka gaga fa tsy tao ny ombin-tsarety iray lehibe inndrindra. Noheverina fa tapa-tady ilay omby ka nojerijerena teo amin'ny manodidina ihany.
Rehefa nazava ny andro dia tapa-kevitra fa nampandre ny Fokonolona ihany ka natao ny fitadiavana sy fanarahan-dia. Afa-nenina ny rehetra fa tena lasan'ny mpangalatra ilay omby ka nody.
Nony tonga tany an-tanana dia nisy nahita teo avaratry ny sekoly Tombontsoa Antsirabe II ny fatin'omby iray efa nesorina avokoa ny nofony ka nampandre ireo olona fa sao io ilay omby.
mardi, 29 janvier 2019 17:53
Antenimieram-pirenena: Hivory tsy ara-potoana voalohany amin’ity taona 2019 ity
Hivory tsy ara-potoana voalohany ny Parlemanta amin’ity taona 2019 ity araka ny didim-panjakana laharana faha 2019-028 tamin’ny 24 janoary 2019 ; izany dia hanomboka ny alarobia 30 janoary 2019 amin’ny 11ora atoandro ao amin’ny Lapan’i Tsimbazaza ho an’ny Antenimieram-pirenena.
mardi, 29 janvier 2019 10:25
Cours Pétrole janvier 2019
Prix actuels à la pompe (litre en Ariary)
4200 2630 3550
Prix appliqué depuis le Mardi 04 Décembre 2018
25-01-2019 61.49 53.45
28-01-2019 59.70 51.99
Variation ($) -1.79 -1.46
Variation (%) -2.9% -2.7%
mardi, 29 janvier 2019 09:44
Taux de change j+7: Revitalisation de l'Ariary
Taux de change 21 janvier 2019:
1 USD = Ar 3 590.64
1 EUR = Ar 4 089.42
Taux de change 28 janvier 2019:
1 USD = Ar 3 526.22
1 EUR = Ar 4 029.54
mardi, 29 janvier 2019 09:40
Andapa: Olona efa-mianaka maty nihotsahan’ny tany
Omaly alatsinainy 28 janoary tokony ho tamin’ny telo ora tolak’andro no nitranga ny loza tao Tsararivotra Andapa Sud, noho ny fisian'ny rotsak’orana tsy nanam-pitsaharana nandritra ny andro, tombanana ho nampihotsaka ny tany, ka avy hatrany niantefa tamin’ny tokantrano nisy an’ireto tra-doza ireto.
Ankizilahy 6 taona ny zandriny indrindra ary zokiny roa mianadahy manodidina eo amin’ny 12 taona avy, miaraka amin’ny renim-pianakaviana ireto namoy ny ainy ireto. Nieren-doza kosa ny Raim-pianakaviana izay tsy tao nandritra io fa tany an-tanimboly.
Omaly alina dia nandrasana tao amin’ny Tranom-pokonolona ireto razana ireto, izay manana fihaviana avy Ambalavoanio Sambava.
Ny Distrika sy ny fiadidiana ny tanàna no nandray an-tanana ny fikarakarana ny razana.
mardi, 29 janvier 2019 09:11
Helikôptera nianjera tany Tsaratanana: Horaisin’ny fitondrana an-tanana tanteraka ny fitsaboana ireo niharan-doza
Tonga teny amin’ny Hopitaly Miaramila Soavinandriana, omaly hariva, nisolo tena ny Filohan’ny Repoblika, nitsidika sy nampahery ary nirary fahasitranana haingana ho an’ireo niharan-doza, vokatry ny fianjeran’ny angidim-by nitondra tompon’andraikitry ny Faritra sy Zandarimariam-pirenena ao amin’ny Faritra Betsiboka, ny Praiminisitra Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian.
Nanambara ity farany fa araka ny fandinihina nataon’ny mpitsabo dia tsy misy atahorana ny ain’izy ireo. Nomarihiny koa fa horaisin’ny fitondrana an-tanana tanteraka ny fitsaboana.
mardi, 29 janvier 2019 09:09
Diplaomasia: Michael Peter Pelletier no Ambasadaoron’i Etazonia ho an’ny Repoblikan’i Madagasikara sy ny Vondron’ny Nosy Comores
Tamin’ny 16 aogositra 2018 ny Ambasadaoro Pelletier no notendren’ny Filoha Donald Trump, raha ny 02 janoary 2019 izy no voatondro andeha aty Madagasikara sy ny Nosy Comores. Andrasana afaka herinandro vitsy ny fahatongavany.
Ny taona 1987 izy no nanomboka niditra teo amin’ny sehatry ny diplomasia ary matihanina amin’izany sehatra izany. Manana ny laharana mitovy lenta amin’ny “Ministre-Conseiller” izy. Talohan’izao fanendrena azy izao dia nisahana ny andraikitry ny Sojaben’ny “School of Professional and Area Studies” tao amin’ny Ivotoeram-panofanana ireo diplomaty amerikana izy.